Daniel S. McCoy, CAS, Sound Devices ၏ ၆၈၈ သစ်ကို Summer Variety Series သို့တင်ဆောင်သည် NAB သတင်းများ | 688 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS, နွေရာသီအရောင်းသွက်စီးရီး၏သတ်မှတ်မည်မှအသံဖုန်းများအတွက် '' နယူး 688 ဆောင်ကြဉ်း
ဟောလိဝုဒ်, ဇွန် 23, 2015 - မကွာပြီးနောက် အသံဖုန်းများအတွက် ယင်း၏အုတ်မြစ်အသစ်ကမိတ်ဆက် 688 ရောနှော / အသံဖမ်း, ဝါရင့်သံကိုအင်ဂျင်နီယာဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS သစ်တနာရီကြာထိုသို့အလုပ်သမား, လယ်ပြင်၌ရှိသောကြောင့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် အား NBC ဟာသအမျိုးမျိုးစီးရီး ငါဆိုလိုတာကသလားနိုငျ! , လူရွှင်တော် / ရုပ်ရှင်မင်းသား Marlon Wayans ဖွငျ့ Hosted ငါဆိုလိုတာကသလားနိုငျ! အတူတူရပ်-up, လူရွှင်တော်က Jeff ဆိုးဆေးနှင့်သရုပ်ဆောင်လန် Ritchson ထူးခြားတဲ့, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအပြုအမူနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်, dancer များနှင့် Choreographer Cheryl Burke ကစူပါစတားမှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင် Ciara, ဂျိုး Jonas နှင့်နီကိုးလ် Scherzinger ချီးကျူးတတ်၏။ ခြောက်လပတ်သင်တန်းကျော်တွေ့ရှိနေရသည်အဆိုပါပြပွဲသည်, ဇာတျသိမျးစဉ်အတွင်းရာသီရဲ့အဆုံးစွန်ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်တဦးတည်းသွန်းအဖွဲ့ဝင်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
အသံဖုန်းများအတွက် ပြပွဲရဲ့ထုတ်လုပ်မှု၏ရက်သတ္တပတ်နှစ်ခုအတွင်း 688 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ McCoy နှင့်ပေတရုØlsted, Matt Brodnick အဲရစ်ပီယပ်, ဂယ်ရီ Tomaro, Troy Wilcox နှင့် Ernie အပါအဝင်မိမိအ crew- Munoz-ချက်ချင်းထုတ်လုပ်မှုသို့ 688 ပေါင်းစည်း။ "ဒီ 688 အဖြစ်မှန်-စတိုင်အခြေအနေများဝမ်းသာပါတယ်အဆင်ပြေအောင်နှင့်ကျန်ရှိသောငါးပတ်အပြစ်ကင်းစင်စွာဖျော်ဖြေ," McCoy ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကတကယ်ကျွန်တော်အစာကျွေးခဲ့ကြသည့်ကင်မရာများမှအဆုံးစွန် signal ကိုဆူညံသံအချိုး mono-ရောမွှေပေးရန် MixAssist feature ကိုမှီခို။ "
အတွက်အဓိကဆင့်ကဲကိုယ်စားပြုကော်မတီ အသံဖုန်းများအတွက်'' ရောနှောနှင့်အသံဖမ်းပစ္စည်းများ, ပု 688 ရဲ့အကောင်းဆုံးထဲကနေအလားတူ အသံဖုန်းများအတွက်'' အောင်မြင်သော 633, 664 နှင့် 788T ထုတ်ကုန်; ဒါကြောင့်ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်အာဏာအရှိဆုံးခရီးဆောင်ရောနှော / အသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ MixAssist Auto-ရောနှောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, 12-သွင်းအားစု, ရှစ်လက်ငင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောစပ်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်း, 192-kHz နမူနာ, သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ, PowerSafe နှင့် QuickBoot အပေါ်အသံနှောင့်နှေးကဲ့သို့သော Stand-ထွက် features တွေတပ်ဆင်ထားလာပါတယ်။
အဆိုပါ 688 ထည့်သွင်းဖို့ပထမဦးဆုံး 6-Series ရောနှော / အသံဖမ်းဖြစ်ပါသည် အသံဖုန်းများအတွက်'' MixAssist နည်းပညာ။ ပထမဦးဆုံး 788T နှင့်အတူမိတ်ဆက်, MixAssist 688-ရုပ်သံလိုင်းအော်တိုရောစပ်စွမ်းရည်ပူဇော်ဖို့ 12 အတွက်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးခေတ်မီ algorithm ကိုသုံးပြီး MixAssist အလိုအလျှောက်လှုပ်ရှားသွင်းအားစုများ၏အဆင့် attenuates နှင့်မသက်ဆိုင်ပွင့်လင်းမိုက်ခရိုဖုန်းများ၏အရေအတွက်တသမတ်တည်းနောက်ခံအဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဖြီး filtering နှင့် phasing အပိုငျးအကိုလည်းအသိဥာဏ်တူညီသောအော်ဒီယို signal ကိုလက်ခံရရှိမိုက်ခရိုဖုန်း attenuating လျှော့ချနေကြသည်။
"ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကိုတင်းကျပ်တယ်အမျှကျနော်တို့ပိုမြန်ရွှေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ 688 ရှိခြင်းသည်ငါတို့အဘို့ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ပဲ" ဟု McCoy ကပြောပါတယ်။ "ဒီ 688 တက် boot လုပ်ဖို့ပိုမြန်, ထိရောက်အလွန်တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, ထို MixAssist ကျနော်တို့အတိတ်ကာလကို အသုံးပြု. ခဲ့သောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုလွယ်ကူ rotary faders ရောနှောဖို့စေသည်။ ကျနော်တို့လန်းစပြုပြီနှင့်အချိန်အများစုကိုဖော်စပ်ခဲ့ကြသည်။ MixAssist တက်ကြွစွာဖြင့်သင်သည်အမှန်တကယ်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့နှင့်သင့် overhead မိုက်ကရိုဖုန်း၏တည်နေရာကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ lavs MixAssist အားဖြင့်သင့်လျော်စွာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြသည်ဟုသိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြီးမားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေး၏။ "
McCoy ဒီဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများများအတွက် 1 အပေါ်လိုင်းများ 2, 5,6နှင့် 688, နဲ့ Analog များအတွက်လိုင်းများ3နှင့်4အသုံးပြုသွားမည်။ တစ်ဦး Lectrosonics UCR688 ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိရိယာအစုံနှင့်အတူ screet 42 သေးသေးလေးမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် SMV လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ခါးပတ်-pack ကိုက transmitter: အ 4061 အပြင်, McCoy Wisycom MCR411S-အမေရိကန်ကို dual စစ်မှန်တဲ့-မတူကွဲပြားမှုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF သေးသေးလေးအသံဖမ်း, DPA ဃကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"ဒီပြပွဲအကြီးအသံနဲ့ငါ 688 များ၏အရည်အသွေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကယ့်ကိုအထင်ကြီးလေးစားခဲ့ကြပါပြီ," McCoy ကထပ်ပြောသည်။ "ကျွန်မရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းများအပေါ်အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားသည်။ "
အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-06-23
ယခင်: Meredith အသံလွှင့်အားလုံးသည်အမေရိကန်စခန်းများတစ်ဖက်မှာ Volicon Observer TS (R) စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်သစ်ခုတ်စနစ်များဖြန့်ချထား
နောက်တစ်ခု: Bluebell မောရှေ- အခြေခံ. စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် GUI ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ MNC Software များဘုံဘိုင်